कहाँबाट आयो ‘हुँदै नभएको’ कृषि मन्त्रालयको सीमा मिचेको ‘प्रतिवेदन’? – MySansar
Posted on June 25, 2020 by Salokya
तर त्यसअघि नै २०७६ को जेठमा नेपालन्युजमा यो ‘प्रतिवेदन’सहितको समाचार आएको देखिन्छ। मन्त्रालयले उतिबेला नै खण्डन नगरिदिँदा यो ‘प्रतिवेदन’ अहिलेसम्म पनि मिडियामा आउने गरेको देखिन्छ। अहिले पनि लिम्पियाधुरासहितको नक्शा नेपालले सार्वजनिक गरेपछि फेरि यो ‘प्रतिवेदन’ कान्तिपुर दैनिकमा समेत समाचारका रुपमा देखा परेको छ। यो प्रतिवेदन साँच्चैको अस्तित्वमा भए मिडियाले थप विवरण सार्वजनिक गर्ला नि।
4 thoughts on “कहाँबाट आयो ‘हुँदै नभएको’ कृषि मन्त्रालयको सीमा मिचेको ‘प्रतिवेदन’?”
Pingback: कृषि मन्त्रालयको हुँदै नभाको प्रतिवेदन : ‘कान्तिपुर’को क्षमायाचना, ‘नागरिक’को स्पष्टीकरण, ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ चुप « Mysansar
Pingback: ‘नागरिक’को अनलाइनबाट गायब भएको एउटा न्युज, के थियो समाचारमा ? « Mysansar
अब यस्तो खबर खुब र झन धेरै आउँछ जुन बेला जे खोजे पनि पाउने भए पछि र यिन्लाइ चम्की चम्की पराइको हितमा छाप्ने एकथरी मिडिया नामधारी भए पछि। यहाँ आफ्नो हैकमी शोषण र अपराध छोप्न आर्कोलाई झन दोशी देखौने औपनिवेशिक चरित्र ब्याप्त छ।
२०७७ कात्तिक २६ कि २६ गतेको नागरिक दैनिकले यो समाचार कृषि मन्त्रालयको नाममा आएको नक्कली विज्ञप्ति राखेर अझ विज्ञप्तिमा नागरिकको लोगो राखेर कपी राइट गरे्र लामो समाचार छापेको थियो । हिजो २१ असार २०७७ मा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त नक्कली विज्ञप्तिको खण्डन गरेपछि नागरिक दैनिकले आफ्नो अनलाइनबाट उक्त समाचार पूरै हटाएको छ । यसबारे पनि आओस ।